DAAWO: Wasiirkii hore Arimaha Dibada Ma ku dagdagay eedaynta wasiir Xirsi? |
DAAWO: Wasiirkii hore Arimaha Dibada Ma ku dagdagay eedaynta wasiir Xirsi?
Maalmihii u danbeeyay waxa la isla dhex marayay warqad ay baahisay barta faafisa siraha aduunka ee Wikileaks ,taas oo lagu sheegay in xukuumada Somaliland ay heshiis la gashay Puntland iyo Somaliya si loo sameeyo dawlad fadaraal ah oo ka dhaxaysa.
Warbaahinta qaar ka mid ah ayaa qoray in wasiirka wasaarada madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali xaaji Xasan uu ku eedeeyay wasiirkii hore ee Arimaha dibada Maxamed Cabdilahi Cumar in uu saxeexay heshiiskaasi ,taasina ay ahayd sobobta shaqada looga eryay.
Warbaahinta warkaasi qoray ma ay keenin warqad qoraal ah,cod laga duubay ama muuqaal uu wasiirka madaxtooyadu arintaasi ku sheegayo,markii arintaasi suuqa ay soo gashay waxa iyaguna ka hadlay xisbiyada mucaaradka iyo madasha oo soo xiganaya warbaahinta qortay warkaasi.
Isla shalay ayuu wasiirka Madaxtooyadu beeniyay in uu wax eedayn ah u jeediyay wasiirkii hore ee Arimaha Dibada ,waxa la sheegayaana ay tahay been cad.
Hadaba maanta ayaa wasiirkii hore ee Arimaha dibada Maxamed Cabdilaahi uu arintaasi ka hadlay ,waxa uu eedayn balaadhan usoo jeediyay wasiirka Madaxtooyada isagoo isaga laftiisuna daliishanaya warkaa ay warbaahinta qaar ka qoreen wasiirka madaxtooyada oo ilaa hadda aan wax cadayna ah loo haynin
Hadaba su’aashu waxa tahay wasiirkii hore ee Arimaha dibadu ma ku dagdagy in uu eedayntaasi u jeediyo wasiir Xirsi ?
Halkan ka Daawo…Jawaabta Maxamed Cabdilaahi Cumar.